I-ID yokuChukumisa yekhibhodi ye-iMac entsha isebenza kuphela kwi-Apple Silicon | Ndisuka mac
I-ID yokuChukumisa yekhibhodi ye-iMac entsha isebenza kuphela kwi-Apple Silicon
Xa izolo basibonise iMac entsha yexesha I-Apple Silicon, Kwaye basicacisela ukuba ikhibhodi yayo yayine-ID yesazisi ebandakanyiweyo, ngaphezulu komnye wethu weza nento efanayo. "Ndiza kuyithenga le bhobhodi kwi-Mac yam yangoku, kwaye ngenxa yoko ndiya kuba nokhuseleko olunikwa ngumnwe."
Ewe ayizubakho, majete. Umsebenzi webhayometriki uya kufumaneka kuphela xa ikhibhodi idityaniswe kwi IMac kunye neprosesa yeM1. Ukuba iMac yakho ine-Intel processor, ikhibhodi iya kusebenza ngokugqibeleleyo, kodwa i-ID yokuChukumisa iya kukhubazeka. Usizi.
Enye yeenoveli ezininzi ezibandakanya iMac Apple Silicon entsha, ngaphandle kwamathandabuzo ikhibhodi yayo yoMlingo nayo IDA yokuqinisekiswa kweminwe. Iya kuba luncedo kakhulu ukungena ngokukhawuleza kwi-macOS okanye uqinisekise ukuthengwa kwi-Intanethi ngeApple Pay.
Ikhibhodi yomlingo eneTouch ID ngokupheleleyo iyahambelana nayo yonke iMac M1kubandakanya iMac entsha, i-13 intshi iMacBook Pro, iMacBook Air, kunye neMac mini. Xa isetyenziswa kwi-Intel esekwe kwiMacs okanye ezinye izixhobo zeBluetooth, ikhibhodi yomlingo iya kuqhubeka nokusebenza ngaphandle kweTouch ID, into eyahlukileyo elawulwa yi-M1.
Okwangoku ayizukuthengiswa ngokwahlukileyo
Ngelixa ikhibhodi entsha yoMlingo ihambelana nazo zonke ii-Apple Silicons, iya kufumaneka kuphela nge-iMac entsha, ubuncinci ekuqaleni. IMac entsha inokuqwalaselwa ngenye yeefayile ze- Iikhibhodi ezintathu ezahlukeneyo, kubandakanya uguqulelo oluqhelekileyo oluneTouch ID, uhlobo oluqhelekileyo ngaphandle kweTouch ID, kunye nohlobo olwandisiweyo ngeTouch ID kunye nekhiphedi enamanani.
Ngokwembali, iApple ikhuphe ezinye izinto ezizodwa zeMac emva komhla wokumiliselwa kweMac.Xa iMac Pro yasungulwa ngoDisemba 2017, umzekelo, iinguqulelo zeGrey Space zeKhibhodi yeMicrosoft, iMagic Mouse, kunye neMagnil Trackpad kuphela ziyafumaneka ngeMac Pro, kodwa zazifumaneka ngokwahlukeneyo ngo-Matshi 2018.
I-iMac entsha enekhibhodi entsha yoMlingo inoku-odolwa ukusukela nge-30 ka-Epreli kwaye iya kufumaneka kwisiqingatha sesibini sika-Meyi. Kuyakufuneka ke ngoko ukuba ulinde iinyanga ezimbalwa ukuba ezi zibhodi zithengiswe zodwa. Iya kuba lukhetho olufanelekileyo ukugqibezela IMac mini M1, umzekelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » I-ID yokuChukumisa yekhibhodi ye-iMac entsha isebenza kuphela kwi-Apple Silicon